रामेछापमा दलित घरभित्र छिरेको भन्दै बालिकालाई दिईयो चरम यातना ! « Pokhara Pati
रामेछापमा दलित घरभित्र छिरेको भन्दै बालिकालाई दिईयो चरम यातना !
१७ घण्टा घरको थाममा बाँधेर सिस्नो लगाई कुटपिट गरिएको पीडितको आरोप
रामेछाप । घरभित्र छिरेको निहुँमा दलित समुदायकी बालिकालाई चरम यातना दिइएको छ । रामेछाप मन्थली नगरपालिका–६ भलुवाजोरमा १३ वर्षीय सरिता नेपालीलाई घरभित्र छिरेको निहुँमा २१ घण्टासम्म डोरीले थाममा बाँधेर चरम यातना दिएको हो ।
गैरदलित समुदायको घरभित्र छिरेको निहुँमा स्थानीय देवीस्थान आधारभूत विद्यालयमा कक्षा ४ मा अध्ययनरत नेपालीलाई सोही स्थानका ६३ वर्षका शेरबहादुर श्रेष्ठले नेपालीलाई हात र कम्मरमा नाम्लोले बाँधेर घरको दलिनमा चार घण्टासम्म झुन्ड्याएको पीडित बालिकाले बताउनुभयो ।
त्यसपछि १७ घण्टा घरको थाममा बाँधेर सिस्नो लगाई कुटपिट गरिएको पी डितको आरोप छ । बालिकालाई सोमबार अपराह्न चार बजेदेखि मंगलबार मध्याह्न १२ बजेसम्म नियन्त्रणमा लिई बाँधेर यातना दिइएको थियो ।
दलित समुदायको भएर घरभित्र पसी दही चोरेर खाएकाले बाँधेर राखेको पीडक शेरबहादुर श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँले आफ्नो घरमा रुद्री लगाउने खर्च व्यहोर्नुपर्ने माग राख्नुभएको छ ।
बालिकालाई बाँधेर लगातार कुटपिट गरेपछि स्थानीयले प्रहरीमा खबर गरेका थिए । मंगलबार मध्याह्न १२ बजे प्रहरी पुगेर पी डित बालिकाको उद्धार गरेको छ । प्रहरी पुगेर बालिकालाई बन्धनबाट फुकाएर बन्धनमुक्त गराएको हो ।
पीडक शेरबहादुर श्रेष्ठलाई मंगलबार नै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । पी डित बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण गरी आवश्यक भए उपचारमा पठाउने र नभए परिवारको जिम्मा लगाएर पी डकमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापका प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक राजकुमार थिङले बताउनुभयो । यो खवर आजको नेपाल समाचारपत्रमा छापिएको छ ।